Resa-behivavy… | NewsMada
Par Taratra sur 08/03/2018
Tsy hay ny tsy hiresaka mikasika ny vehivavy amin’izao andro natokana ho azy ireo izao. Tsy atao resa-behivavy (takoritsika, fosafosa, sns) akory izy ity fa famakafakana na fampahatsiahivana, raha ny marina kokoa, ny zava-misy iainan’ny vehivavy eto amintsika.
Tsy fety ny andro androany na dia maro aza ny renim-pianakaviana sy ny tovovavy tsy namonjy toeram-piasana. Ny 8 marsa toy izao no hanamafisana ny fitakiana ireo zo sahaza ny andriambavilanitra. Tsy hotanisaina ny salanisa, avy amin’ny fanadihadiana samihafa, toa tsy mahalaza ny zava-misy marina amin’izay fampiharana ny zon’ny vehivavy izay.
Zo, io no fototra ahafahany mandroso amin’ny lafiny rehetra, miainga amin’ny ao an-tokantranony, ny ankohonany. Mampivelatra ny maha izy azy izany ary ahafahany mandray anjara mivantana amin’ny fampandrosoana ny firenena. Azo lazaina izany fa, raha mihisatra ao anaty fahantrana ny firenena, mbola tsy tratra ny tanjona amin’ny fampanajana ny zon’ny vehivavy.
Hatreto, mbola vitsy an’isa ny vehivavy malagasy mirotsaka amin’ny fitantanana ny firenena raha miohatra amin’ny lehilahy. Tsy ny fahaizana akory no tsy ampy. Tsapa ho mbola olana ny fiheveran’ny olona fa mahomby kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy amin’ny fitarihana. Hatramin’izao anefa, tsy hita izay fandrosoana teto kanefa lehilahy hatrany no nitondra ny firenena. Sao mba fotoana izao hanomezana seza sy sehatra ny vehivavy ?
Manampy trotraka koa ny ataon’ireo andriambavilanitra nomem-pahefana. Toy ny tsingala mahalala ombin-tena izy ireny ; tsy « manaikitra » izay nanolotra toerana azy na hitany izao aza ny tsy fanarahan-dalàna, ny tsy fahaiza-mitantana, ny kolikoly sy ny kiantranoantrano ataony.
Ny zava-misy no hitsarana ny dingana vita amin’ny fampanajana ny zon’ny vehivavy. Firifiry amin’izy ireo moa no tsy afa-manohy fianarana na mbola mazoto aza? Firifiry no tsy afa-mikofoka na dia miaritra ny mangidy sy ny tsindry hazolen’ny lehilahy aza ? Mbola maro ny olana sedrain’ny vehivavy malagasy, saingy tsy ho voatanisa eto.
Asakasaky ny mpitondra sy ny mpanao politika, izay heverina fa tsy ho variana intsony manao resa-behivavy sy adim-behivavy. Lany andro mifamiravira ary mieritreritra fa izay avo feo ihany no mahery.